laacibfm.com » Mario Balotelli Oo Loo Heysto Inuu Kufsaday Gabar Aan Qaangaar Aheyn & Qirasho Lama Filaan Ah Uu Sameeyay
Mario Balotelli Oo Loo Heysto Inuu Kufsaday Gabar Aan Qaangaar Aheyn & Qirasho Lama Filaan Ah Uu Sameeyay
Wargeyska Nice-Matin ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahankii hore ee kooxda Nice Mario Balotelli in lagu eedeeyay inuu kufsaday gabar aan qaangaadhin iyadoo la sheegay inuu falkaan dhacay bishii July 2017.
Gabadhaan ayaa sheegtay in kufsiga uu ka dhacay meel lagu caweeyo oo ku taala ceebta magaalada Nice laakiin Super Mario ayaa ku andacoonaya inuu isagu yahay dhibanaha oo gabadhaan iyo qareenkeeda ay doonayaan inay lacag baad ah ka qaataan.
Dalka Talyaaniga ayaa haatan lagu furay labo baaritaan oo la xiriira kiiskaan. Mid waxaa laga furay magaalada Brescia oo uu haatan degan yahay Balotelli islamarkaana uu ka ciyaaro iyadoo baaritaanka uu ku saleysan yahay eeda la xiriirta inuu kufsaday gabar aan qaangaar aheyn.
Gabadha eedeyneysa Balotelli ayaa sheegtay in Balotelli uu ku qasbay inuu la galmoodo markii ay 16 sanno jir aheyd.
Baaritaanka kale wuxuu ka furan yahay magaalada Vicenza oo ah meesha ay degan tahay gabadhaan, iyadoo baaritaanka uu ku saleysan yahay haddii dacwadeeda ay tahay mid ku dooneyso inay lacag baad ah uga qaadato weeraryahanka.
Qareenada Balotelli ayaa sheegay in qareenka gabadhaan uu dalbaday in la siiyo lacag gaareysa 100 kun euro ama inay dacwad ka gudbin doono weeraryahankii hore ee Nice iyo Marseille.
Balotelli ayaa lagu eedeynayaa inuu qaawiyay gabadhaan islamarkaana ku qasbay inuu u galmoodo. Waxay sheegtay inay ka diiday laakiin taasi kama aysan celin inuu howshiisa wato.
“Waxaan doonayay inaan ooyo. Ma dooneynin in arinta aysan sidaan noqoto laakiin xoog ayuu ii sheegtay. Waxaan dareemay inaan awood laheyn” ayay ku tiri warbixintii ay u gudbisay boliiska.
Balotelli dhankiisa waxa uu boliiska u qirtay inuu u galmooday gabadhaan laakiin wuxuu sheegay inay u sheegtay inay 18 sanno jir tahay oo ah da’da galbeedka looga yaqaano qaangaarnimo, islamarkaana iyadu bilowday xiriirka galmada.
Wuxuu ku doodayaa inay wax walba raali ka aheyd balse ay dooneysay inay lacag baad ah uga qaadato isagoo sheegay in dhowr bilood ka dib ay soo wacday una sheegtay inay 16 sanno jir tahay oo ay warbaahinta u sheegi doonto inuu la seexday gabar aan qaangaar aheyn.
Wuxuu sheegay in qareenkeeda uu la soo xiriiray isagoo dalbanaya 100 kun euro ama haddii kale ay ku eedeyn doonaan kufsi iyo inuu gabar aan qaangaarin la seexday.